I-GvSIG - Geofumadas
Ukusebenzisa i-gvSIG njengoMthombo ovulekile okunye
Mahhala Ukuthuthukiswa Software njengenhlangano injini yokushintsha
Cishe konke sekumi ngomumo ngengqungquthela ye-7th gvSIG Latin America kanye nengqungquthela yaseCaribbean, ezoba seMexico. Sibheka njengokubalulekile ukwengezwa kancane kancane kwezikhungo zomphakathi, obekuphela konyaka zilawulwa yisoftware yokuphatha, inqubo ezimweni eziningi eqale ekusetshenzisweni kwamaphrojekthi wezimali aphesheya ukuthi ...
Inkululeko nobukhosi - cishe yonke into isilungele ingqungquthela ye-9 gvSIG
Kumenyezelwe ingqungquthela yesishiyagalolunye yamazwe omhlaba ye-gvSIG, ezoba sesontweni lokugcina likaNovemba eValencia. Kusukela osukwini lwesibili, bekusetshenziswa njalo isiqubulo esikhombisa ukugxila kokuxhumana okuyizinkampani kosuku okuzoba nakho. Ukwenza kancane emuva, lezi kube yizihloko zengqungquthela ...
Geospatial - GIS, I-GvSIG
I-gvSIG 2.0 nokuPhathwa kweengozi: ama-webinars ama-2 azayo
Kuyathakazelisa ukuthi imiphakathi yokufunda ngokwendabuko ibivele kanjani, nokuthi yini ebidinga igumbi lesigungu elinezinkinga zalo zebanga nendawo, kusuka kwi-iPad kungafakazelwa kusuka kunoma yikuphi emhlabeni. Kulo mongo, kuseduze kakhulu nokwakha ama-webinars amabili sonke okufanele siwasebenzise, ​​sicabangela lokho kwe ...
Ukufundisa CAD / GIS, Geospatial - GIS, -Google Earth / Amamephu, I-GvSIG
Novemba, izenzakalo ezibalulekile ze-3 ensimini ye-geospatial
Ngenyanga okungenani kuzokwenzeka imicimbi emithathu ezothatha okuthile ku-ajenda yami ... naseholidini lami. 1. I-SPAR Europe Izobe iseHolland, eHague cishe ezinsukwini ezifanayo nezika-Inspired Lo mcimbi uletha ndawonye abaqambi kwezobuchwepheshe be-3D, ikakhulukazi obuvela eYurophu lapho ukhona…
Geospatial - GIS, I-GvSIG, Microstation-Bentley
Inkambo ye-GvSIG isetshenziselwa ukuLawula umhlaba
Ukulandela umkhondo wezinqubo ezikhuthazwe yi-gvSIG Foundation, siyajabula ukumemezela ukwenziwa kwesifundo esizothuthukiswa kusetshenziswa i-gvSIG esetshenziselwe izinqubo Zokuphathwa Komhlaba. Isifundo siphethe i-CREDIA, isinyathelo esithakazelisayo esenziwe ngaphakathi kwecebo lokusimama le-Biological Corridor Project ...